Eksodus 17 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
17 Yemka indibano iphela yoonyana bakaSirayeli entlango yaseSin+ ngokwamaqela abo, ngokomyalelo kaYehova,+ baza bamisa inkampu eRefidim.+ Kodwa kwakungekho manzi okuba abantu basele. 2 Baxabana abantu noMoses bathi:+ “Sinike amanzi sisele.” Kodwa wathi uMoses kubo: “Kutheni nixabana nam nje? Kutheni nimvavanya nje uYehova?”+ 3 Banxanelwa amanzi apho abantu, baza bammbombozelela uMoses abantu besithi: “Kutheni na usinyuse saphuma eYiputa ukuze usibulale ngonxano, thina noonyana bethu nemfuyo yethu?”+ 4 Ekugqibeleni uMoses wadanduluka kuYehova, esithi: “Ndiya kusithini na esi sizwana? Sekukancinane ukuba sindixulube!”+ 5 Wandula uYehova wathi kuMoses: “Dlulela phambi kwabantu+ uze uthabathe kunye nawe athile kumadoda amakhulu akwaSirayeli kwanentonga yakho owabetha ngayo uMlambo umNayile.+ Yiphathe esandleni sakho uze uhambe. 6 Khangela! Ndiya kuma phambi kwakho khona eliweni laseHorebhe. Uze ulibethe iliwa elo, kothi ke kuphume amanzi kulo, basele abantu.”+ Wenjenjalo ke uMoses phambi kwamehlo amadoda amakhulu akwaSirayeli. 7 Ngoko walibiza igama laloo ndawo ngokuba yiMasa+ neMeribha,+ ngenxa yengxabano yoonyana bakaSirayeli nangenxa yokumvavanya kwabo uYehova,+ besithi: “Ukho na uYehova phakathi kwethu okanye akakho kusini na?”+ 8 Kwafika ama-Amaleki+ aza alwa noSirayeli eRefidim.+ 9 Wathi uMoses kuYoshuwa:+ “Sinyulele amadoda nize niphume,+ nilwe nama-Amaleki. Mna ngomso ndiya kuma phezu kwenduli, intonga kaTHIXO oyinyaniso isesandleni sam.”+ 10 Wenza ke uYoshuwa kanye njengoko watshoyo uMoses kuye,+ walwa nama-Amaleki; waza yena uMoses, uAron noHure+ banyuka baya phezu kwenduli. 11 Kwathi kamsinya nje akuba uMoses esiphakamisile isandla sakhe, woyisa uSirayeli;+ kodwa kwakuthi kamsinya nje esakusihlisa isandla sakhe, koyise ama-Amaleki. 12 Zathi zakudinwa izandla zikaMoses, bathabatha ilitye, balibeka phantsi kwakhe, waza wahlala kulo; uAron noHure bazixhasa izandla zakhe, omnye ekweli cala nomnye ekweliya cala, zaza zahlala ziqinile izandla zakhe de latshona ilanga. 13 Ngoko ke uYoshuwa wamoyisa uAmaleki nabantu bakhe ngohlangothi lwekrele.+ 14 Wathi ke uYehova kuMoses: “Kubhale oku kube sisikhumbuzo encwadini+ uze ukuvakalise ezindlebeni zikaYoshuwa uthi, ‘Ndiya kumsusa ngokupheleleyo angabi sakhunjulwa uAmaleki phantsi kwamazulu.’”+ 15 UMoses wakha isibingelelo waza walibiza igama laso ngokuthi nguYehova-nisi, 16 esithi: “UYehova uya kulwa imfazwe noAmaleki kwisizukulwana ngesizukulwana,+ ngokuba ephakamise isandla nxamnye netrone+ kaYa.”+